Impi eSiriya, okuyinto lusaqhubeka, waqala entwasahlobo ka-2011, ngo-March 15. Kuye okulungiselelwe ngokucophelela futhi owenziwa aziwayo kakade emlandweni iskripthi. Eqinisweni, Syria kwakuhileleke amabutho angaphandle impi yombango. Ngiza lapha "Arab Spring". Lo mbhikisho ngokumelene Assad kanye uhulumeni neo-Baathist ukuthi ehlelwe kahle.
Impi Syria (owaziwa nangokuthi lokhu kubhikisha aseSiriya) waqala ingxabano eqhubekayo phakathi abasekeli uhulumeni Baath Party kanye izimbangi zawo.
Ngo-April 2011 nokucindezela kuvukela, ebuthweni lezempi laseSiriya wayalelwa ukuvula umlilo ngqo ku ababhikishi. Imibhikisho aphambuka abaqaphele kuvukela lokuvimbezela. Manje kuba khona ukungqubuzana ngaphandle izimpi esiqokiwe: ezempi zenzeke kanyekanye ezweni lonke.
Ngokuvamile, isakhiwo sokuqala eliphikisayo kuleli zwe, okuyinto waqaphela njengezenzo ezifanele eNtshonalanga, kwaba iSyrian National Council. By endleleni, it idalwe kusukela ngaphandle, i-West. Kodwa akazange ukwanelisa lokho okulindelwe-United States itsetfwe entsha "esisemthethweni uhulumeni umSiriya." Ngo-November 2012 at Doha kwaba ukwakha umfelandawonye ukuphikiswa nokuvukela.
Impi eSiriya, izimbangela zazo amanga ngaphandle isikhathi eside kunaleso ngaphakathi ezweni uya ukondla US kanye kubangane bawo (umzabalazo imithombo). Zombili izinhlaka "uhulumeni esisemthethweni YaseSiriya," kulawulwa Muslim Brotherhood. Sokucasuka angaba nempi yombango ukwedlula okugqugquzelwa kusuka ngaphandle. amaqembu aphikisayo Martial phakathi nalesi sikhathi usukhulile anda futhi quantitatively. Phakathi kwabo kwakukhona jihadists ne-al-kaidovtsy. Isiyalo sabo nokushiseka ngokweqile imele "Dzhabhat en-Nusra", okuyinto US UMnyango State usewenzile kakade uhlu usongo amaphekula.
Ngaphezu ukuphikiswa, impi Syria uye wahilela nezinye amabutho. It Commandos aseNtshonalanga Qatar. US akusho ngokusemthethweni nikeza ukuphikiswa kuhlonyiwe Syria. Kodwa lena kuphela ngokuvumelana izibalo ezisemthethweni. Eqinisweni, "iqembu eliphikisayo" ngohlelo izikhali zakamuva American. US Yiqiniso, isenzo yi-proxy. Notshwala eyinhloko izikhali akuzona ENtshonalanga naseMpumalanga (kusuka emazweni Arab - Qatar, Saudi Arabia, Lebanon, njll). Ukusekela Islamists kukhona Washington, London kanye nabangani babo.
imizamo Western okuhloswe ngaso ephoqelela unswinyo ukulwa nombuso, eChina naseRussia ivinjiwe kuze kube manje. Futhi ngenkathi akwaziwa ukuthi inkinga nkinga ingaxazululeka nendlela ukuqeda impi eSiriya.
Januwari 2, 2013 i-United Nations ithe isibalo sabantu abashona empini lidlule abantu abayizinkulungwane 60. amaqembu alwela amalungelo abantu ibike ukuthi ukwephulwa ezinkulu, Nokho, ayenziwa nguhulumeni yaseSiriya. Ngakho-ke EU ukhiphe i izingalo ukuvimbela phezu Assad umbuso. Kulokhu, ukuma US akukakabi ecacile neqondile. States ukholelwa ukuthi ehlukile uhulumeni esemthethweni ngeke ukuxazulula lesi simo, ngoba Islamists olukhulu bahileleke empini ngokusekelwa okusobala Iran Al-Qaeda.
Kwenzekani manje kulo lonke izwe, singaphumelela ukuchaza amagama anjengelithi "ulwazi impi" eSiriya. Sici Its idatha ukusakaza ngokuqhubekayo eza futhi wabhubhisa isitha. West njalo osebenza izinyathelo kontrinformatsiya iziphathimandla yaseSiriya akazange ahambe kulelo zwe.
Izimbangela kweMpi Yezwe Yokuqala
Ikoloni German: umlando ukunwetshwa indawo
Ukuchitheka ka eMpumalanga naseNtshonalanga: izimbangela eMpini Yomshoshaphansi, futhi nemiphumela yayo
Abalimi Homemade. ungumlimi Homemade ngoba motoblock
Imifino in a kubhayela double
Yakutian Laika: incazelo nesithombe zohlobo
Picket ezicijile metal - kahle futhi ihlala isikhathi eside
"Laura" (whey mezorollerom): ukubuyekezwa, izincazelo, yokusetshenziswa nekghono